Ny Semalt Expert dia mamaritra ny fahasamihafana eo amin'ny 301 redirects sy ny redirects 302
Na ny tranonkala web na ny pejin-tranonkala dia manoratra sy mamorona ho an'ny tolotra isan-karazany, ny iray amin'ireo olana mahazatra indrindra dia ny code 200. Midika izany fa ny pejy na ny loharano web dia alefa mankany amin'ny tsisy saina ary ny Ireo hackers dia mety vonona ny hiditra ny tranokalanao ary hanafika ny rafitrao. Ny code iraisana iraisana dia 301, raha 302 sy 404 kosa no hita ankehitriny ary avy eo. Mazava ho azy, tsy maintsy mitady toro-hevitra momba ny fomba hisorohana azy ireo ianao. Raha toa ka averina alefa miaraka amin'ny alàlan'ny lohamilina amin'ny alàlan'ny serivisy ny pejin-tranonkalanao, dia mety manomboka mahita ny code 300 ianao.
301 dia loharano maharitra ary 302 dia fanodinana vonjimaika, izay midika fa afaka manaisotra 302 ianao raha mikarakara zavatra vitsivitsy notontosain'ny Mpitarika Success Manager Semalt , Michael Brown.
Ahoana ary ny fomba fampiasana ny 301 redirect ?
Ny fivoarana 301 dia maharitra hatrany, ary izany no nolazainay taminao. Milaza ny motera fa ny pejy iray dia nafindra, nesorina, na nofafana, angamba noho ny olana sasany momba ny kalitao. Ity kaody ity dia afaka manova ny rafitra manontolo sy ny dikan'ny tranonkalanao, manimba ny lazany eo imason'ny milina fikarohana..Maro ny olona mijaly noho io hadisoana io ary tokony hampiasa teknikan'ny SEO fotsy mba hisorohana ny fahatongavany.
Mampalahelo fa ny orinasa mpamorona tranonkala isan-karazany dia tsy afaka manampy anao hanala ireo rediredy 301. Ampifandraisina amin'ny meta tags izy ireo, ary ny lohamilina 302 dia mitodika mba hitazomana ny tranokalan'ny mpanjifany. Avelao aho hilaza aminao fa fomba fanao mampidi-doza ary ny fitaovam-pitadiavana dia tsy hanaiky ny iray amin'ireo paikady fanodinana.
Raha jerena amin'ny seho SEO, ny redirect nosoratan'i 301 dia tsy afaka mahazo ny tranokalanao ny laza sy ny fahitana azonao antenaina amin'ny aterineto. Ary raha tsy mihaino tsara an'io olana io ianao ary tsy mamaha izany haingana araka izay tratra, dia mety tsy maintsy manova ny anaran'ny sehatra ianao ary mety handefa lahatsoratra avy amin'ny tranonkala iray hafa. Matokia ahy, mety ho dingana mavesa-danja izany ary mety hitarika anao hamita ny toerana misy anao ao amin'ny valin'ny fikarohana.
Nahoana ianao no tokony hampiasa ny 302 redirect ?
Ny iray amin'ireo antony fototra amin'ny fampiasana ny redirect 302 dia ny mitazona ny URL ratsy tsy hiditra amin'ny endriny maharitra amin'ny valin'ny fikarohana. Ohatra, raha namorona tranokala olon-dehibe ianao ary te-hitantana ny tranonkalanao amin'ny URL hafa dia azonao ampiasaina ity lohapejy 302 ity amin'ny alàlan'ny karazan-safidy maro sy ny angona momba ny fotoam-pivoriana. Rehefa maka ny URL an'ny pejy fandraisana ianao dia tsy tokony hiahiahy satria tsy hekeny ny pejy sy ny votoaty voasoratra ao anatiny. Mety hamaritra ny tranokalanao ho azo antoka izy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azontsika atao ny milaza fa mila mitady fitaovana handikana ny tranokalanao ho xyz.com ianao fa tsy abc.com, ary tsy azo atao afa-tsy amin'ny lohateny 302.
Raha mampiasa ny redirects 302 ianao, dia tsy tokony handefa ireo mpitsidika amin'ny tranonkala tsy fantatra na mampiahiahy. Zava-dehibe ihany koa ny tsy mamerina manodin-dàlana ireo mpijery any amin'ireo pejy ireo indray satria mety ho reraka sy hanakatona ny varavarankely ary hanakana ny tranokalanao mandritra ny androm-piainany Source .